कलाकार दिपक क्षेत्रीको छोरी भन्छिन्- दिपक क्षेत्री मेरो दोस्रो बुवा हुन्, मेरो आमाले यसकारण दोस्रो बिहे गरिन् (भिडियो हेर्नुस) उहाँ मेरो जन्म दिने बुवा नभएपनि कर्म दिनु भो ! सबैले शेयर गरौं « Online Tv Nepal
कलाकार दिपक क्षेत्रीको छोरी भन्छिन्- दिपक क्षेत्री मेरो दोस्रो बुवा हुन्, मेरो आमाले यसकारण दोस्रो बिहे गरिन् (भिडियो हेर्नुस) उहाँ मेरो जन्म दिने बुवा नभएपनि कर्म दिनु भो ! सबैले शेयर गरौं
Published :6January, 2020 9:06 pm
कलाकार दिपक क्षेत्रीले यो सँसार छोडेको धेरै दिन भाको छैन् । उनको बिदाईले चलचित्र क्षेत्र, चलचित्रकर्मी र नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकहरु शोकमग्न छन् । यसैबिच दिपक क्षेत्रीको छोरी रिस्ता बस्नेत मिडियामा आएकी छिन् । वास्तवमा, रिस्ता दिपक क्षेत्रीको आफ्नै छोरी होईनन् । रिस्ताको आमाले अर्को परिवारमा कलहपछि दिपक क्षेत्रीसँग दोस्रो बिहे गरेकी थिईन् ।
अनलाईनटिभीनेपाल संगको कुराकानीमा रिस्ताले दिपक क्षेत्री र आफ्नो सुमधुर सम्बन्धको बारेमा सबै बोलिन् । उनले दिपक बुवाले आफुलाई जन्म नदिए पनि कर्म दिएको बताईन् । चलचित्र क्षेमा अभिनय गर्ने कलाकारहरु मध्ये उनलाई दिपक क्षेत्रीको जस्तो राम्रो अभिनय कसैको नलाग्ने पनि बताईन् । उहाँ मेरो जन्म दिने बुवा होइन् तर…,छोरीले कलाकार दिपक क्षेत्रीको अन्तिम इच्छा पुरा गर्दै , बुवासंग बिताएको पल सम्झेर रोइन…हेर्नुहोस् भिडियो…